जूनलाई चुम्बन गर्ने कवि ली पो | मझेरी डट कम
editor — Mon, 10/17/2016 - 02:29
महान् वुद्धपुरुष लाउत्सुको जन्मभूमि चीनमा जन्मिएर संसारलाई प्रेम, आनन्द, उल्लासको माध्यमबाट मानवआत्माका टाँसिएको युगयुग पुरानो दुःख पखाल्न आह्वान गर्ने, अनि ताओको मर्म बुझेको स्वीकार गर्ने कवि हुन् ली पो । लियोका यी काव्यपक्तिहरू मुटुको भित्री तारलाई छोइदिन्छ–
यस जगतमा हाम्रो जीवन
एक महान् स्वप्त मात्रै हो
म किन दुःख खेप्दै जीवन बिताऊँ ?
मलाई दिनभरि नै पिएर लट्ठिन देऊ ।
मानिसहरू भन्छन् सफा रक्सी सन्त हो
जाँडले ज्ञानीहरूको पथको अनुशरण गर्दछ
मैले सन्त तथा ज्ञानीहरूलाई पिएको छु
त्यसो भए प्रेतहरू र परीहरूको अध्ययन किन ?
तीन बटुकोले म महान् ताओको मर्म बुझ्छु ।
एउटा सिङ्गै सुराहीलाई रित्याएपछि
म र यस संसारमा कुनै भेद रहँदैन
मैले रक्सी लाग्दा जस्ता चिजहरूको स्वप्न देखेको छु ।
त्यस्ता कुरा संयमीको मगजमा कहिल्यै पनि चढ्दैनन् ।
मेरो कलमको एउटै तरिकाले
म पहाडपर्वत थर्काउँछु ।
कविता पूरा गरेपछि म रमाउँदै हाँस्दछु
मेरो मुखको सीमा हुँदैन
यदि धनदौलत र मानप्रतिष्ठा
सदा स्थायीरहँदा हुन त
नदीहरू आफ्ना उद्गमस्थलतिर
फर्किदै उल्टो बग्ने थिए ।
धन, पद, पैसा, मानप्रतिष्ठालाई कौडीको मूल्य नदिई संसारका सांसारिक क्रियाकलापहरूलाई सपना हान्ने लि पो आफ्नै मनमौजी आन्तरिक आनन्दमा चुर्लुम्म डुबेका थिए । चौवीसै घण्टा शरानी मधुशालामा मस्त भैरहनु उनका विशेषता थिए । ईशाको सातौँ शताब्दीमा चीनमा जन्मिएका यी कवि वाङ्ग वंशको स्वर्णिम काव्ययुगलाई भेटेका थिए । त्यतिखेरका राजाहरू नै यति काव्ययुगलाई भेटेका थिए । त्यतिखेरका राजाहरू नै यति काव्यप्रेमी थिए कि सरकारी नोकरीमा छिर्न पनि कवि हुनु जरुरी थियो । कविता लेख्न सिपालु मान्छेले मात्र त्यो अवसर पाउँथे ।
स्वयं लि पो पनि शाही राजघरानामा जन्मेर काव्यसंसारका चम्किला तारा बनेका थिए । उनलाई उनको वृद्धि र प्रतिभाको कदर गरेर सरकारी पदधारण गर्न भनिएको थियो । तर आत्मिक स्वतन्त्रताका गायकले यो बन्धनकारी नोकरीलाई स्वीकार गरेनन् । आजीवन यायावर कविको रूपमा पक्कड यात्रीको रूपमा देशका कुनाकाप्चा चाहार्ने काम गरे । घुमफिर, काव्यसिर्जन र मधुशालामा झुम्न उनका असीम तथा अप्रीतम आनन्दका विषयहरू थिए । उनले सक्कली कविहरूको काव्मय जीवन बिताए । कुनै पनि प्रकारको बन्धन उनी रुचाउँदैनथे ।
उनी जन्मदै उनकी आमाले आकाशको चम्किलो शुक्र ग्रहलाई सपनामा देखेकी थिइन् । त्यसले प्रभावले उनको ना ली पो राखिन् । पो को अर्थ चम्किलो, टल्किने प्रकाश हुन्छ । वास्तवमा विश्व साहित्यमा नै एक उज्जवल ताराको रूपमा उनका काव्यहरू अध्ययन गरिन्छ । उनका ३०भन्दा बढी काव्यहरूले आजपनि संसारलाई प्रेम, आनन्द र असीम अनुभूतिको संसारमा डुबाइदिन्छ ।
प्रेम र रोमान्सका कविका कविताहरूमा प्रकृतिको विम्ब यसरी आएको छ, शब्दमा जादूले भावको असीम अनुभूतिलाई जीवन्त ढंगले प्रतिविम्बन गरेको छ । शरावका शौखिन ली पोले त्यतिखेरका वादशाहसँग देशाटनको अनुमति माग्दा भट्टीहरूमा विनामूल्य रक्सी खान पाउने गरी लालमोहर लाइदिएका थिए अरे ।
प्रकृतिको शब्दचित्रणका अनुपम शिल्पी थिए । नदी, फूल, आकाश, पहाड, जंगल, हरियाली घाँसे मैदानहरू, लहलह वालीमा झुलेका खेतवारी, मैदान, मरुभूमि, सन्ध्या, प्रभात जूनतारा, आकाश, यौवन, आँशु, वर्षात् आदिको संसारमा डुबेर कविता लेख्थे । चन्द्रमालाई आफूसँगै रक्सी पिउन आमन्त्रण गर्थे । फूलहरूसँग कुरा गर्थे, ताराहरूसँग आँखा झिम्याउँथे, नदीहरूसँगै यात्रा गर्थे ।
कुनै पनि बन्धन र प्रायोजित जीवन बाँच्न मन नपराउने यी फक्कड पुकीर कविको आखिरी जीवन कष्टप्रद पनि भयो । यौवनका दिनहरू घुमेर बिताएका यी कविलाई विद्रोहमा सामेल भएको आरोपमा जेल पनि हालियो । उनका दुस्मनहरू उनलाई मार्न चाहन्थे तर पागलको अभिनय गरी जेलबाट उम्किन सफल भए । एउटा अनाकष्टर दुर्गम गाउँमा पुगेर शान्ति र एकान्तमा रहन थाले । रोग र बुढ्यौलीले गाँज्दै लगेको शान्ति र एकान्तमा रहन थाले । रोग र बुढ्यौलीले गाँज्दै लगेकोले स्याहार गर्ने मान्छे थिएनन् । उनको एकमात्र सहारा रक्सी थियो ।
एकदिन रक्सीको सुराही बोकेर साँझको बखतमा डुङ्गामा चढेर हेलिन थाले । सन्ध्याको मनोरम क्षणमा क्षितिजबाट पिलिक्क जूनले चिहायो । जूनको प्रतिविम्ब उनी तैरिरहेको तलाउमा यति स्फटिक जस्तो फिँजियो । उनले सोचे– कठै ! जून यो टलपल टलपल पानीमा मलाई भेट्न आइपुगेछ भनेर उसलाई अङ्गालो हाल्न र चुम्बन गर्न तलाउमा मुख जोडे । त्यहीबेला डुङ्गा पल्टिएर जूनसँगै जलसमाधि लिए । वास्तवमा उनको मृत्यु पनि एक सुन्दर कविताजस्तै भएर घटिदियो । आजपनि चिनियाँहरूले उनलाई अत्यन्त आदर गरेर देवताजस्ता कविको रूपमा मनमनै पूजा गर्छन् अरे । सघन काव्य अनुभूति र काव्यमयी जीवन झल्काबाट आखिर विश्वलाई मानवीय जीवनको गरिमाबोध गराउनु, आनन्दको असीम लोकमा परिभ्रमण यी कविप्रति शतशः नमनः ।
सहमति र भैँचालो उस्तै
प्रेम पत्र स्वीकारेर
चिसो सिरेटो र यात्राहरु
तिम्रो सिउँदो सजाइदिने मेरो एउटै धोको